टिका सानुको गुरु इन्द्रेणीमा पुगेर दोहोरी गाएपछि कृष्ण कंडेल परे चकित,पहिलोपटक यतिधेरै सहयोग पाए | Public 24Khabar
Home News टिका सानुको गुरु इन्द्रेणीमा पुगेर दोहोरी गाएपछि कृष्ण कंडेल परे चकित,पहिलोपटक यतिधेरै...
टिका सानुको गुरु इन्द्रेणीमा पुगेर दोहोरी गाएपछि कृष्ण कंडेल परे चकित,पहिलोपटक यतिधेरै सहयोग पाए
छोरी जन्मेको एक महिना पुगेको थिएन, पहिरोले घर भत्काइदियो । त्यसपछि २४ वर्षीया भावना कार्कीको बसाइ त्रिपालमुनि छ । छोरी अहिले सात महिनाकी भइन् । एक सातादेखि ज्वरो आएको छ । लगातार बान्ता गरिरहेकी छन् । औषधिमूलोका लागि उनीसँग पैसा छैन । पुसको चिसोमा उनलाई छोरी जोगाउन मुस्किल भएको छ ।
गत साउन १४ देखि ६ दिनसम्म अविरल वर्षा हुँदा चुरे गाउँपालिकाको गौजन बस्तीमाथि पहिरो गएको थियो । भदौसम्म स्कुलमा बसेका गौजन र ववडी गाउँका २३ परिवार असोजमा भीमदत्त राजमार्गको सहजपुर सडक खण्ड छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसेका थिए । गत मंसिर २७ मा चुरे गाउँपालिका ३, ४, ५ र ६ का करिब १ सय ५० पहिरोपीडित एकीकृत भई तराई झरे । उनीहरू गौरीगंगा नगरपालिका–१ पशुपति सामुदायिक वन छेउमा आएर बसेका छन् ।
यस अवधिमा भावना र उनको काखे बालक धेरै पटक बिरामी परे । केही दिनअघि मात्रै २ वर्षको छोरोलाई पनि ज्वरो आएको थियो । छोरो निको हुन नपाउँदै काखे छोरी फेरि थलिएकी छन् । आफन्तबाट एक हजार रुपैयाँ सापटी लिएर छोरोको उपचार गरेको उनले बताइन् । ‘त्यही हजार रुपैयाँ पनि तिर्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘फेरि छोरीका लागि कोसँग हात थापौं ?’ ववडीकी सपना कार्की ३ महिनाको छोरा लिएर शिविरमा आइपुगिन् । चिसोले उनको छोरा पनि बिरामी परेको छ । सपनाको चार जनाको परिवार त्रिपालको बासमा छन् । दुई वर्षको जेठो छोरालाई पनि सन्चो छैन । शिविरमै बस्दै आएकी पुष्पादेवी कार्कीका दुई छोरालाई पनि चिसोले ज्वरो आएको छ ।
त्यस्तै महिमा कार्कीले पनि आफू र दुई छोराछोरीलाई ज्वरो आएको बताइन् । ‘खुला आकाशमुनिको सामान्य त्रिपालको बास अति नै कष्टपूर्ण भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले कहिले हाम्रो समस्यालाई बुझिदिने हो ? कति दिन यसरी बस्नुपर्ने हो ? बालबच्चा सबै बिरामी पर्न थालेका छन् ।’ उनले खाद्यान्नको पनि समस्या भएको बताइन् ।
तराईको कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा गतिलो ओढ्ने–बिछ्याउने र लगाउने लुगा नहुँदा पहिरोपीडित बालबालिकाहरू निमोनिया, रुघाखोकी र ज्वरोले थला पर्न थालेका छन् । गर्भवती, बूढापाकाहरूमा पनि चिसोले टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र खोकी तथा दम चलेको छ । वयस्क महिला–पुरुषलाई पनि ज्वरो आएको ५९ वर्षीय सूर्ज कार्कीले जनाए ।
विस्थापित अर्जॅन कार्कीले यहाँ बिरामी परेकाहरूको कोरोना परीक्षणसमेत नभएको बताए । ‘कोरोना लक्षण भएका बिरामीहरू पनि छौं,’ उनले भने, ‘परीक्षण गरिएको छैन ।’ उनले स्थानीय चौमलाको अस्पतालमा जाँदासमेत राम्रो उपचार नपाएको गुनासो गरे । पहिरोपीडितको शिविरबाट आएको भनेपछि आफ्नै स्थानीय तह चुरेको अस्पतालमा जाऊ भन्ने गरेको उनले बताए ।
उनले शिविरमा बसेकाहरूले खोलाको पानी खानुपरेको गुनासो गरे । पहिरोपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले यहाँ बसेको २२ दिन पुगे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको बताए । ‘यहाँको बसाइ निकै कष्टपूर्ण छ, सरकारले चाँडो व्यवस्था मिलाउने पहल गरोस्,’ उनले भने ।
Previous articleमलेसियामा रहेका लाल बहादुर १२ बर्ष देखि मलेसियामै बेप*त्ता, खाेजीदिन परिवारको आग्रह। (सहयोगकाे लागि सेयर गराै)
Next articleयसरी महाकाली नदीमाथि भारतले बनायो बाँध, फेरि रु’वायो दार्चुलावासीको उठीबास हुने ख’तरा Mahakali River (बिराेध काे लागि सेयर गराै)